UMJIKELO WENTSIMBI YANGAPHANTSI YOMBANE
Ukudityaniswa kweQela leeViking
Imizi-mveliso yeConnexus ikuvumile ukuqhubeka kwi-VC Brand yeeTyathanga zensimbi. I-VC Brand ithi inkqubo yokuvelisa egqwesileyo, kunye neenkonzo ezinde zobomi bemihla ngemihla. Olu hlobo lwentsebenzo luquka oku kulandelayo:
? Gcwalisa iiRivets zoMdlalo weendaba
? Iibhola ezisecaleni zeBar Side
? Izinto eziphezulu ezikumgangatho ophezulu kunye nokunyanga ubushushu
SESITIMBI SENTSIMBI PLUS
? Ukugungxula nge welding ngaphandle kususa nayiphi na
uphazamiseko kunye neeprothini
? Imingxunya ehambelanayo ye "True-Fit"
? Imigqomo engenamthungo isusa
“Ukolula phambi kwexesha”
LWETYATHANGA LWESIXEKO SESIMBI SESIMBI
? Ubushushu obuPhathwe ngokupheleleyo
? Cinezela ngokuPheleleyo iiRivets
? Izixhobo ezisemgangathweni ophezulu kunye nokunyanga ubushushu
AMAXESHA AMANINZI ATHANYELWEYO, AMAQHINGA AMAXABISO, IZIQHELEKO, ISITHUBA NEZIBHEDLELE
? Ngokukodwa eyakhelwe ukumelana nesantya esiphakamileyo, usetyenziso lweempembelelo
? Umkhokeli weShishini iminyaka engama-25 kunye neminyaka
? Isisombululo seSiko
AMATYATHANGA OKUQHUBA ESUKU
? Eyilelwe ubukho benkxaso eyandisiweyo kwizicelo zeSugar Mill
? Ubushushu waphatha Stainless Isinyithi, ukhetho olunzima lweChannel ezikhoyo
? Umgangatho kunye nokuncamathela okuqhelekileyo
IIMPAWU EZIKHETHEKILEYO KUZO ZONKE IIMAKI
I-Inco Cast alloy yentsimbi kunye neHadfield manganese yamatsheyini okusila ayenzelwe ezona nkonzo zinzima kwizicelo zokulungisa iinkuni namhlanje. Ziyilelwe ukuphatha ukunxiba okugqithileyo, imithwalo eqine enkulu kunye nefuthe elibi. Amandla ethu okubumba okuncamathiseleyo kwikhonkco kususa naliphi na ithuba lokudala ubushushu ngokuchaphazela imimandla; Nangona kunjalo, izinto ezinokuthengiseka ngokulula zinokuvunyelwa ukuvumela amaxesha okukhawulezisa ukutshintsha kokuncamathiselwa kwesiko. Zonke izixhumanisi zethu ze-cast ziye zahlutha intloko kunye neerivet ziphelisa ukukhuselwa kwicala lokunxiba kwii-rivets. Oku kusivumela ukuba siphalaze amakhonkco kunye namacandelo omnqamlezo onzima ukongeza kumandla apheleleyo eetyathanga kunye nokwenza iindawo ezinkulu zokuhambisa ukusabalalisa imithwalo kwindawo enkulu yokunciphisa ukunxiba kwimivalo esecaleni.